Maqal: Xeer ilaaliyaha Puntland oo booqasho ku maraya Gobolka Mudug. – SBC
Maqal: Xeer ilaaliyaha Puntland oo booqasho ku maraya Gobolka Mudug.
Xeer ilaliye Maxamuud Xasan Aw Cismaan
Maxamuud Xasan Aw Cismaan Xeer ilaaliyaha Guud ee Dowladda Puntland ayaa beriyihii u dambeysay booqashooyin kor meer ah ku marayay xarumaha garsoorka iyo xabsiyada gobolada Puntland, waxaana haatan uu gaaray Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug.
Xeer ilaliye Maxamuud Xasan Aw Cismaan ayaa kulan saxaafadeed uu ku qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in booqashadiisa Gaalkacyo ay ku aadan tahay sidii uu ugu kuurgali lahaa Xaaladaha Cadaaladda iyo Garsoorka Gobolka ka jira gobolka Mudug, sida ay u shaqeynayaan iyo waxyaabaha ka dhiman,
Maxaabiista Xabsiga ku jirta ayuu sheegay inay iskugu jiraan dad Dambiyo kala duwan u xiran oo qaarkood ku eedaysan yihiin inay ka tirsan yihiin ama la shaqeynayeen xoogaga xarakada Alshabaab kuwaas oo dhawaan go’aan laga gaarayo sida uu hadalka u dhigay, waxaa kale oo uu sheegay in uu diyaarin doono kiisaska dad iyagu u xiran lacag lagu leeyahay iyo mago loo heysto awgeed.
Dhowaan ayay aheyd markii sidan oo kale uu kormeero ugu maray Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Gobolada kale ee Puntland sida gobolka Bari oo uu ka sameeyay kormeer laamaha cadaaladda iyo garsoorka xabsiyada iyo weliba goobaha kale ee maxkamadaha.
Sikastaba ha haaatee xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa sheegay in kormeerada ceynkan oo kale ah ay yihiin kuwo toosinaya shaqada guud ee ku aadan cadaaladda Dalka .